မြန်မာသံတော်ဆင့်: ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် Border Guard Forces ဖွဲ့ စည်းပေးသင့်
---- June 20, 2012 at 4:36 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့အိုင်ဒီယာ...အစိုးရက လူကြီးတွေ ဖတ်သင့်ပါတယ်။
- သူတို့ တစ်ဦးချင်းစီကမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလိုက်နာပါမည်၊ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု ကျမ်းသစ္စာကျိမ်ဆိုနေကြခြင်းကပို၍ကောင်းပါသည်။ အဲ့ဒါက ?????????ရောမချနဲ့နော်
အရမ်း ကောင်းပါသည်။ အစိုးရ လူကြီးတွေ ရော opposition တွေပါဖတ်သင့်ပါသည်။
မင်းတို. ALP၏ အိုင်ဒီယာ ဘာလဲဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးက သိပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အစိုးရက အဆိုပါနည်းများအား လုပ်ကြည်. စေချင်ပါသည်။
Foolish man, do you think Bengali will accept your ideas.
They won't accept at least one idea.
They will do according to their plan by forced. What would you do?
What is their plan and evidence? Tell us first. You areareal insane man. So so pity!
RohingyaBlogger July 14, 2012 at 1:59 AM
The Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) calls on:
The Government of Myanmar to,
1.Protect equally all people living in Rakhine State.
2.Initiate an independent investigation into the human rights abuses and bring the perpetrators to justice, including their trial in an independent and fair court of law.
3.Permit access to international monitors based in Myanmar, such as representatives of the UN Country team, and Yangon-based diplomats and the media, to assess the situation and make recommendations for further action.
4.Amend the 1982 Citizenship Law to accommodate the Rohingya as an ethnic group of Myanmar and guarantee that they are not excluded in the forthcoming 2014 national census.
ပလိပ်ရောဂါ တို့ကာလ၀မ်းရောဂါတို မြန်မြန်ပြန့် ပွားစေသော ဇီဝလဗုံးများ အဲဒီ ဘ၈င်္လီတွေသိပ်သည်းနေသောနေရာကို လျှို့ ဝှက်ဖောက်ခွဲပစ်ပါ...ပြည်တွင်မှာ အဲဒီအတတ်ပညာသည်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်...
ဒီ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာစတင်အမြစ်တွယ်ခဲ့ရတဲ့ပထမတရားခံက အင်္ဂလိပ်တွေလယ်ကျွန်အဖြစ်ခေါ်ယူလာခြင်း၊ ဒုတိယတရားခံက ဖ.ဆ.ပ.လ ဦးနု သူမဲအနိုင်ရရေးအတွက်
မဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ စည်းရုံးခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီနောက်တတိယတရားခံက စစ်အစိုးရလက်ထက် စစ်ထောက်လှမ်းရေး ဘူးသီးတောင်/မောင်တောမှာရှိတဲ့ စောက်ဘင်္ဂါလီတွေကို လည်းကောင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီး
တွေလိုသတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံသားထုတ်ပေးရန်ကုန်မြို့ခေါ်လာ လုပ်ငန်းတွေနေရာပေးခဲ့ဒီကနေသူတို့ ဆွေမျိုးတွေကိုတဖြေးဖြေခြင်းခေါ်ယူလာခဲ့တာအခုဆိုရန်ကုန်မြို့တော်တော်များများမှာ
ဒီစောက်ကောင်တွေအများကြီးရောက်နေပြီ၊ နောက် စတုတ္တတရားခံက ကြံ့/ဖွံ့ ဦးနုလမ်းစဉ်အတိုင်းဘဲ ၄င်းတို့ပါတီအင်အားရှိဘို့နဲ့ အနိုင်ရဘို့အတွက်ဘာလက်မှတ်မှကိုင်မထားတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုပါတီဝင်တွေအဖြစ်မတ်လုံးတွေပေးပြီးဝင်ခိုင်း၊ ဘင်္ဂါလီတွေကလည်း ရေငတ်တုံးရေတွင်းထည်းခုံဆင်လိုက်တာ
ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တော နယ်တ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ ကျေးရွာအားလုံးမှာ ကြံ့/ဖွံ့ ပါတီဆိုင်ဘုတ်တွေ ရွာထိပ်တွေမှာအထင်းသားတွေ့ရတယ် ``ရွာလုံးကျွတ်ပါတီဝင်များဖြစ်သည်``ဆိုတဲ့စာသားနှင်အတူ???? မယုံရင်သွားကြည်ပါ.... လာပြန်ပြီနောက်တပါတီ...အထင်ကရပါတီပါဘဲ ? NLD ပါတီမှာ ဘင်္ဂါလီတွေတော်တော်များ
၀င်ရောက်နေပြီ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီဘင်္ဂါလီတွေဟာ ကြိုတင်အကြံအစည်ရှိရှိနဲ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမျိုးရေးတွေကိုရှုတ်ထွေးသွားအောင် ကြိုတင်ကြံစီနေတာတွေ့ရမယ်.....
နောက်တခု လွှတ်တော်မှာ အမတ်တက်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ် ဒါပထမခြေလှမ်းဘဲ ဒီကောင်တွေနိုင်ငံသားဘယ်လိုရလည်း စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့ အထောက်အပံ့တွေကြောင့် (လ၀က) က၀န်ထမ်းတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူး (လ၀က)မှာ အာဏာမရှိဘူးလေ အမိန့်နာခံရတဲ့သူတွေ လေ မလုပ်ရင်အလုပ်ပြုတတ်ကုန်ကြမှာ.......
ဒီလောက်ပါဘဲ ..ပြောချင်တာတွေတော့အများကြီးဘဲ ..... ဒီစောက်ခွေးသူတောင်စားဘင်္ဂါလီတွေကို ရှေ့ဆက်ပြီး သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေဘယ်လိုဖြေရှင်ကြမှာလည်း.???
ဒီလိုဘဲအီးရောအီးရောဆိုရင် အပျက်အပျက်နဲ့ သွေးချောင်းတွေစီးကုန်တော့မှာ ဗမာ့သွေးကရဲတယ်နော် အင်္ဂလိပ်/ဂျပန် ကိုလိုနီဖက်ဆစ်တွေကိုတောင် မောင်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာနော်...